လမ်းပြကြယ်: စစ်တွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများလမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြ
by Burma VJ Media Network on Friday, January 6, 2012 at 6:19pm
ဇန်န၀ါရီ ၆ - ၂၀၁၂
ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီမှ စတင်ပြီး စစ်တွေ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြလျှက် ရှိကြောင်း စစ်တွေ မြို့ မှ သိရပါတယ်။ ကျောင်းသား အယောက်ငါးရာခန့် မှာ စစ်တွေ တက္ကသိုလ်မှ နေပြီး မြို့ ထဲဘက်သို့ ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြနေခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခု ညနေ ၃ နာရီခွဲ ခန့် အထိ စစ်တွေမြို့ လောကနန္ဒဘုရားနှင့် နာရီစင် တို့ အနီးတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် စုဝေး လမ်းလျှောက်နေကြပါတယ်။ကျောင်းသားအချို့ မှာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးအရှေ့တွင် စုဝည်းနေကြပြီး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက ကျောင်းသားများနှင့် တွေ့ ဆုံ ညှိုနှိုင်းရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်းသိရပါတယ်။ ရဲအင်အား၇၀ ခန့် က ၀တ်စုံပြည့်ဖြင့် ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးအရှေ့တွင် ကာကွယ်စောင့်ကြပ်နေကြပါတယ်။ ကျောင်းသားများ အား အာဏာပိုင်များဘက်မှ တစုံတရာ အရေးယူမှု မရှိသေးသော်လည်း လိုက်ပါစောင့်ကြည့်နေကြောင်း သိရပါတယ်။ ယခင်က ကားခများ ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်သဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများရှိခဲ့ပြီး အာဏာပိုင်များက တစုံတရာ အတိုင်းအတာအထိ အရေးယူ ဖြေရှင်းပေးခဲ့သော်လည်း ယခုအကြိမ်တွင် ယခု လက်ရှိ ၂၀၀ ကျပ်မှ ၅၀၀ ကျပ်အထိ တိုးမြှင့်မည် ဖြစ်သဖြင့် ဆန္ဒပြရခြင်းဖြစ်ကြောင်း စစ်တွေ မြို့ ခံတဦးက ပြောပါတယ်။
photo credit - (http://mmsacm.blogspot.com)
maungtutshwe January 6, 2012 at 11:07 PM
Try, try and try again. Chances of Changes is now. The World is closely watching. We believe, they (the students) are always Trying.